TomTop တွင်အကောင်းဆုံးနည်းပညာညှိနှိုင်းမှုများမှအကျိုးရယူပါ Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | Android ထုတ်ကုန်များ
TomTop သည်အာရှစျေးကွက်တွင်လူသိအများဆုံးစတိုးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် Xiaomi, OnePlus, OPPO သို့မဟုတ် Huawei။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်လိုက်များဖြစ်လျှင်အောက်ပါတို့ကိုအာရုံစိုက်သင့်သည် နည်းပညာအပေးအယူ လူကြိုက်များစတိုးဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုအရွက်သော။ ခရစ်စမတ်အတွက်အချိန်ပဲ။
una ကြီးစွာသောအထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအာရှအမှတ်တံဆိပ်မှထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ရေး။ TomTop တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာပိုမိုသိလိုပါသလား။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာအားလုံးကိုပြောပြပါမယ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် နည်းပညာထုတ်ကုန်များအပေါ် bargains များစွာသောရွေးချယ်မှုကြွင်းသောအရာမှထင်ရှားပေါ်ထွန်းဖို့သေချာကြောင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်။ ဒီမြှင့်တင်ရေးအတွက် TomTop မှာကတည်းကကျဆုံးခြင်း၏အရေးအကြီးဆုံးဖုန်းများထဲမှကျွန်တော်သည်အထူးလျှော့စျေးကိုရှာသည်။ တကယ်ပါပဲ, ကျွန်ုပ်တို့သည် OnePlus 5T ကိုဆိုလိုသည်။ အောက်ဖော်ပြပါကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူသင့်ကိုချန်ထားပါတယ်။ သူတို့ကိုမလွတ်မြောက်ပါစေနှင့်။
1 S6 ဘလူးတုသ်နားကြပ် - ယူရို ၂.၄၉
2 USB charger ပါသည့် Lixada laptop ကျောပိုးအိတ် - ၁၆.၃၃ ယူရို
3 EDIFIER Bluetooth နားကြပ် - ၂၆.၆၅ ယူရို
4 OnePlus 5T - ၄၁၂.၄၂ ယူရို
5 OUKITEL C8 - ၆၄.၄၉ ယူရို
S6 ဘလူးတုသ်နားကြပ် - ယူရို ၂.၄၉
အချို့ရှိ နားကြပ် ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်နုတ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ တေးဂီတကိုနားထောင်ခြင်းအတွက်အဆင်ပြေသည့်အပြင်၎င်းတို့သည်ခေါ်ဆိုမှုများစွာအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ငါတို့ကဆူညံသံတွေရှိတယ်၊ ခွဲထုတ်ရန်ကူညီပေးသည် ဆူညံသံ ဒီ S6 မော်ဒယ်မှာ Bluetooth ရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ device နဲ့အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်တယ်။
TomTop ကဒီနားကြပ်တွေကိုယူလာပေးတယ် ယခု၏စျေးနှုန်းမှာ 2,49 ယူရို။ ဤကဲ့သို့သောနားကြပ်များအတွက်အလွန်စျေးသက်သာသောစျေးနှုန်းမှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ ကြီးသောအသံအရည်အသွေးကိုဆက်ကပ်။ သူတို့ကိုဒီဈေးနဲ့ယူဖို့လိုတယ် လျှော့ကုဒ်: AJFO ။
USB charger ပါသည့် Lixada laptop ကျောပိုးအိတ် - ၁၆.၃၃ ယူရို
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကျနော်တို့ဒီနေ့ရှာတွေ့နိုင်သောအသုံးဝင်ဆုံးထုတ်ကုန်များထဲမှ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ပ်တော့ကိုသယ်သွားဖို့ကျောပိုးအိတ်တစ်ခုပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်းတွင်ပိုမိုသောအရာများရှိရန်နေရာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သူ့ဟာသူအလွန်သက်သောင့်သက်သာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အပြင်, ကထွက်ရပ်တည် USB charger ပါ ၀ င်သည်။ ကျောပိုးအိတ်ကိုသယ်ဆောင်ရင်းနဲ့စမတ်ဖုန်းကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Lixada ကျောပိုးအိတ်ဖြစ်ပါတယ် TomTop တွင်ရရှိနိုင်ပါ ၏စျေးနှုန်းမှာ 16,33 ယူရို။ ဒီစျေးနှုန်းရဖို့သင်ဒီကိုသုံးရမယ် လျှော့ကုဒ်: AJUSB3 ။
EDIFIER Bluetooth နားကြပ် - ၂၆.၆၅ ယူရို
နောက်ထပ်နားကြပ်တစ်စုံကတော့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့ကပိုရှိပါတယ် တေးဂီတကိုနားထောင်ရန်သို့မဟုတ်ကစားနေစဉ်ပြုလုပ်ရန်။ အသံအရည်အသွေးကောင်းမယ်လို့ကတိပေးပြီးကတည်းက သူတို့သည်လည်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်စံပြနေစဉ်။ နောက်တဖန် ဘလူးတုသ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်နာရီ ၇၀ ကြာသည်။ တေးဂီတတွေအများကြီးနားထောင်နိုင်တယ်။
TomTop ကဒီ EDIFIER Bluetooth နားကြပ်တွေကိုခေါ်လာတယ် ၏စျေးနှုန်းမှာ 26,65 ယူရို။ သူတို့ကိုဤဈေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ရန်သင်သည်အောက်ပါတို့ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည် လျှော့ကုဒ်: AJVALE ။
OnePlus 5T - ၄၁၂.၄၂ ယူရို
အထင်ရှားဆုံးအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခု TomTop အပေါ်ရောင်းချမှုအပေါ်နောက်ဆုံးလ၏။ စတိုးဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ကို OnePlus 5T ကိုစျေးကြီးပေးတယ်။ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ထူးခြားသည့်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ထူးခြားသည့်ပစ္စည်းတစ်ခု၊ အဆုံးမဲ့မြင်ကွင်းတွင်လောင်းကစားခြင်း။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိပြီး၎င်းသည်၎င်းကိုတစ်နှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးဖုန်းများအဖြစ်သေချာစေခဲ့သည်။
TomTop ကဒီပစ္စည်းကိုဈေးနှုန်းနဲ့ယူလာပေးတယ် 484,17 ယူရို. လျှော့စျေးကုဒ်မသုံးရန်မလိုအပ်ပါ ဒီစျေးနှုန်းကနေအကျိုးခံစားရဖို့။ ဒါကြောင့်သင်ဟာပစ္စည်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒီမြှင့်တင်ရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
OUKITEL C8 - ၆၄.၄၉ ယူရို
တစ်ကြိမ်ထက်မကစကားပြောသောနောက်အမှတ်တံဆိပ်။ OUKITEL သည်ဈေးကွက်တွင်နေရာတစ်ခုရနေသည်။ အခုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးရရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခုကိုယူလာပေးတယ်။ အရာ၏ဤ C8 ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်၎င်း၏အဘို့အထွက်ရပ် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင်။ အတွင်းပိုင်းတွင် quad-core MT6737 ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည်။ ရှိခြင်းအပြင်2GB RAM နှင့် 16 GB Internal Storage.
ဒါဟာအစရှိပါတယ် 3.000 mAh ဘက်ထရီနှင့်နောက်ကင်မရာ 13 MP။ TomTop ကဒီပစ္စည်းကိုစျေးကြီးပေးတယ် 64,49 ယူရို။ ဒါကြောင့်သင်ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒါကသေချာစဉ်းစားသင့်တဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ TomTop ပေါ်မှာဤကြီးစွာသောနည်းပညာ bargains နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေး။ သူတို့ကိုမလွတ်မြောက်ပါစေနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » TomTop တွင်အကောင်းဆုံးနည်းပညာညှိနှိုင်းမှုများ